Ummaatin Oromoo yeroo kamiyu Caalaa ammaa salphina hanga jedhamnee keessaa jirra - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsUmmaatin Oromoo yeroo kamiyu Caalaa ammaa salphina hanga jedhamnee keessaa jirra
Ummaatin Oromoo yeroo kamiyu Caalaa ammaa salphina hanga jedhamnee keessaa jirra!!
IYYA IYYA DABARSAA???
Ganama har’aa ajjeechaafi Reebichi University Naannoo Amaaraa keessatti Barattoota Oromoo irratti cimee itti fufeera!#Goondar University Barattoonni Oromoo Liyuu Haylii Amaaraan Rasaasan rukkutaman nama 5 gaheera!
#Walloo_University Barattoonni Oromoo Liyuu Haylii Mootummaa Naannoo Amaaraan Namni lama (2) du’eera! Namni jaha (6) rasaasan rukkutame Hospital jira!
#Waldiyaa University Durriyýefi Liyyuu haylii Amaaraa yeroo amma dhukaasa Cimaa eegalaniiru!
#Oromoo Mootummaan hin jiru Maatiin Baratoota Ijoollee keessaniif Dirmadhaa??
#Sharegodhuun Qaama dhimmi Oromoof Oromiyaa ilaalu hundaan ga’aa??
Hirphaa Gaanfuree *Oromoon Sitti Kattee* New Oromo Music (Official video 2019)
Uummanni Ertiriyaa baayynnisaa Miliyoona 4 qofa. Garuu biyyadha. Adunyaarratti akka biyyaatti galmooftee jirti. Oromiyaan miliyoona 60 olidha; garuu Naannoo Oromiyaa jedhamti. Ulaagaa biyyaa hinguuttu laataa? #Keeyyata 39 tti gargaaramuun amma!
Jabadhaa Ugguraa Geejibaa Barattoota Yunibarsiitii Haromayya Irraa Bahaan. Hanga Barattootni Oromoo Galuu Danda’an Yoo Haalli Mijaa’eef Qofa. Hangaasu Barattoonni isaaniittis Akka hin Darbiine Dhorka.
Farhan akkam nagaa jirta obboleessa kiya , ummaatin oromoo yeroo kamiyu Caalaa ammaa salphina hanga jedhamnee keessaa jirra .kan nu salphisee 1 Abiy Ahimed 2. ODP dha. Sababiin kufatii oromoo 1. Jarimiya dantaa oromoo fi oromiyaa dhabate dhabamu dha. Ammaati oromoo bararuuf dhaba jaba oromoo qabee deemu nu ha hunda’uu akka gaaffitti marii hayyoota amma America fi Aroopatii geggefamuf deemu ti nu kaasi.”
Qabsoo keessatti bilchinni guddaan yeroo dubbiin hammaatte miira ofii too’atanii karaa boru gufuu namatti ta’uu malu eeggachaa, waan goonu hunda keessatti miidhaa fi faayidaa isaa madaalaa deemuudhu. Yeroo aaran wanti namatti mul’atu hedduu waan ta’eef hundi sirrii ta’a jennee fudhachuu hin dandeenyu. Aarri yaada keenya irrattis dhiibbaa waan qabuuf wanti yeroo aaran godhan yeroo aarri namarraa galu kan biraa ta’ee namatti mul’achuu danda’a. Tooftaa deemuu barbaachisa!